Indlela yokunciphisa umzimba ngokutya kwemichiza? Imenyu, imigaqo kunye neengcebiso
Igama elinoyikisayo lokutya kwakungumgaqo wenyathelo eliphambili, oko kukuthi, ukulungelelaniswa kweempendulo zamakhemikhali emzimbeni. Oku akukhona nje ukutya kokulahleka kwesisindo, kodwa luhlobo lokuthintela nokunyangwa kwesifo sikashukela. Ngokuchaseneyo nabanye, ukutya kweekhemikhali akusekelwe ekunciphiseni umxholo wekhalori yansuku zonke, kodwa ekudleni inani elifanelekileyo lazo zonke izondlo. Umsunguli wokutya, Ugqirha wezeSayensi u-Usama Hadiy, uqinisekisa ukulahleka kwe-100% ye-30 kg xa ubunzima bokuqala bungaphezu kwama-90 kg.
Ukutya kweMichiza kwiiveki ezi-4: imenyu
Siyanixwayisa, ukutya kunzima kakhulu! Naluphina ukuphazamiseka, ukuphambuka kwishedyuli yokutya, ukutshintshwa kweentsuku kunye nemveliso kuya kukhokelela nasiphi na isiphumo. Yiphatha ukutya njengendlela yokwenza utywala. Ngaba ngokwenene awuphuli ukufumana amayeza? Kwi-chemical diet, qaphela.
Ukuphonononga kwalabo abalahlekelwa isisindo bathi imenyu ayikhathazeki, kwaye ukuziva ukulamba kulamalanga ambalwa. Inyanga yokugqibela ayiyi kubuqonda umzimba omtsha omhle. Bambene namantombazana!
Imenyu yeveki yokuqala
Isidlo sakusasa siphepha iindidi: zonke iintsuku ezi-7 sidla 1-2 amaqanda abilisiwe abilisiwe kunye nesiqingatha se-orange / grapefruit. Siphuza i-herbal okanye itiye eluhlaza.
NgoMvulo, ngoLwesine, ngoMgqibelo - iintsuku zokuqhamo. Sidla isithelo esinye okanye ezimbini yonke imini, ngokukhethekileyo iipulo kunye neziqhamo zase-citrus.
NgoLwesibini, isifuba esilisiwe okanye esongwe ngopho, iitamatisi okanye imifuno enomthi, i-citrus.
NgoLwesithathu - i-cheese suluguni, i-brynza okanye i-feta kunye neetatayi kunye nesonka esivela kwisonka sesonka.
NgoLwesihlanu - 2 amaqanda abilisiwe kunye nemifuno.
NgoMvulo, NgoLwesithathu, ngoMgqibelo-inxalenye yenyama nayiphi i-grill okanye i-fried pan.
NgoLwesibini - isonka sesonka esimnyama kunye namaqanda ama-2 abilisiwe. I-dessert, i-orange.
NgoLwesine - phinda umrhumo ngoMvulo, wongeza isaladi eluhlaza kwenyama.
NgoLwesihlanu - intlanzi kunoma yimuphi uhlobo (ngaphandle kokugcoba kwioli), isaladi iklabishi kunye namakhukhamba, i-citrus.
NgeCawa yinto yokuxuba imifuno kubini isibini. Sinquma izaqathe, i-zucchini, i-pepper, isitshalo seqanda, utamatisi.
Ukutya kwemichiza kaDkt. Usama Hadiy: imenyu yesonto lesibini
Isidlo sakusasa sinokufanayo: amaqanda ama-2 kunye nesiqingatha se-orange, kodwa iintsuku ezithembisa ukuba ziyahlukahluka.
NgoMvulo - isaladi esilulayo yePeking iklabishi, ukhukhamba kunye nemifino, amaqanda ama-2 abilisiwe.
NgoLwesibini, ngeLwesithathu - intlanzi okanye inyama ye-steak epanini elomileyo, i-lettuce.
NgoLwesine - feta okanye i-brynza, iiqanda ezi-2 ezithambileyo kunye nesaladi yemifuno efudumele.
NgoLwesihlanu - ukutya okunesonka okuphekiweyo okanye okubiweyo;
Umlayezo weSeturday - i-lettuce, i-lettuce kunye neladidi "I-Iceberg" ene-lemon kunye nokugqoka ubusi kunye neetamatato. Ingxenye yenyama kunye ne-1 grapefruit.
I-Sunday - inkutshi yenkukhu kunye netamatisi kunye ne-orange.
NgoMvulo, uLwesibini, uLwesithathu - uphinda ukudla kwasekuseni.
NgoLwesine, ngoLwesihlanu, ngoMgqibelo-nidla ininzi yeziqhamo.
Imenyu yesonto lesithathu
Ekugqibeleni, akudingeki sidle iprotheni enye. Iveki yesithathu isekelwe ngokupheleleyo kwi-mono-ration kwaye ifana ne "7 ipilisi" yokutya. Abantu abaninzi bacela ukuba ityuwa ingasetyenziselwa ukutya kweekhemikhali. Ewe, izondlo zithintela ukutya kweefowalivat kwaye zongeza izondlo zemvelo: i-pepper emnyama, i-paprika, izityalo ezomileyo, i-basil.
NgoMvulo - izityalo ozifunayo ezingenamkhawulo;
NgoLwesibini - isityalo semifuno, ama saladi ngaphandle kokugqoka;
NgoLwesithathu - sidibanisa iziqhamo kunye nemifuno;
NgoLwesine - sipheka iintlanzi size silungiselele ialadi;
NgoLwesihlanu - usuku lwenkukhu (upheke ngaphandle kwesikhumba);
NgoMgqibelo, ngeSonto - iziqhamo ze-mono-dinners. Sidla uhlobo olulodwa kuphela lwesiqhamo ngosuku.
Imenyu yeveki yesine ekudleni kwemichiza
Ixesha lokubonisa izakhono zecilinary kunye nokucinga, kuba ngeli veki senza izitya, sidibanisa iimveliso, nantoni na. Umgaqo ophambili awukugqithisi umthamo wemihla evumelekileyo yemveliso.
NgoMvulo - 200 amagremu eebilisiwe kunye neenkukhu, 4 utamatisi kunye nekhukhamba, i-orange okanye i-grapefruit.
NgoLwesibini - utamatisi, ukhukhamba, iziqhamo, ii-2 zesinkwa kwisonka sesonka okanye isinkwa sengqolowa.
Iingqungquthela zangoLwesithathu - 2 kunye needrafruit, 200 amagremu yemifuno ngebini, iigremu ezili-100 zetekisi ephantsi ezenziwe ngamanqatha, ii-2 izonka kunye ne-2 utamatisi.
NgoLwesine - 2 ii-pcs. iziqhamo ze-citrus, 400 g iinkukhu zeenkukhu okanye iintambo ezingenakunqanda, utamatato kunye nelakhukhamba, isilum.
NgoLwesihlanu - umxube wemifuno yomxube wee saladi kunye neetatayi, amaqanda ama-2 aphekiweyo, iidiza.
NgeMigqibelo - iimbumba ezimbini ezibilisiwe ngaphandle kwesikhumba, i-100 g ye-brynza okanye i-cottage cheese, ikhukhamba nesonka.
NgeCawa - iincwadana ezimbini zesonka se-rye kunye ne-tomato kunye neentlanzi ezibilisiweyo, i-200 grams yemifuno yemifuno, 2 i-citrus.
Imithetho yokutya kweekhemikhali: akukho nto
Ukuqinisekisa ukuba iziphumo zokutya kweekhemikhali ziyamangalisa ngokwenene, kufuneka uhambelane nemithetho eyi-10 kiki. Ukuba kukho nayiphi na into ephukile, uya kuchitha ixesha kunye nokulimaza imetabolism.
Ungadli izitato kwiyiphi na ifom. Silungiselela imifuno ngaphandle kweryuwa, musa ukuzalisa ngamasididi.
Siphuza iilitha ezimbini zamanzi ngosuku.
Musa ukongeza ushukela, ukhilimu, ubisi kwiiyo kunye nekhofi. Sifaka zonke i-fructose.
Ukuba awuboni umqobo oqingqiweyo kwinani leenkonzo, yidla ngokwaneleyo, kodwa ngokumodareyitha.
Xa isisu siceliwe ngokugqithiseleyo ukutya, sondle ngeetikiti namaapulo. Njengomthetho, akukho ukuhlaselwa kwindlala kwidyidya yokutya.
Kwiintsuku zesiqhamo singabandakanyi amabhanana, amakhiwane, amagilebhisi, imihla.
Yonke imihla, zilawule kwaye ubhale phantsi iziphumo zokutya kweekhemikhali ekuseni emva kwendlu yangasese.
Ukuba awukwazanga ukumelana nokutshiza iqhekeza lekhekhe, thumela kunye nabahlobo be-shish kebabs, ngoko ukutya kukuphazamiseka kwaye kuqale nge-zero. Ngenxa yokuba izinto ezinjalo ziphazamisa yonke inkqubo yokutshintshiselwa.
Musa ukwenza umzimba oqinileyo kunye ne-cardio.
Ungadli rhoqo ngaphezu kweeyure ezingama-2. Ingakumbi lo mgaqo usebenza kwiveki yesine yokutya.
Ukutya okuphumelelayo ngohlobo lwesimboli: indlela yokulahleka isisindo "ipula", "pear" kunye "peach"
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngeveki kwi-5,7,10 kg kwaye uhlambulule isisu ekhaya ngaphandle kokulimaza kwimpilo - ukutya kunye nokuzilolonga ukulahleka kwesisindo esiphuthumayo
Kutheni zonke izidlo ziza kulahlwa
I-Stop-effect: ezintlanu izinto ezithintela ukulahleka kwesisindo
Imithetho e-3 ye-detox enoncoko: indlela yokutya i-watermelon kunye nokunciphisa umzimba ngokufanelekileyo
Ukutya ngokulahleka kwesisindo ngexesha lokuzila ukudla kweOthodoki
I-cottage cheese ehlaza
"Ukuqhuba umqhubi" - imizekelo nencazelo, ividiyo. Yintoni eya kuba yinzuzo?
Iingcali eziqhelekileyo malunga nokusetyenziswa kwezimonyo
Iingcamango zemihla yokuthandana
Senza amabhukumaka kwiincwadi kunye nezandla zethu
Isaladi ne kohlrabi
Hadu gymnastics: indlela yendalo yokuziphilisa
Izityalo ezingaphandle: i-caladium
Yintoni ebhetele: izicathulo ezinesithende okanye ngeentsimbi?
Ubuhlobo bamabhinqa kunye nesimo semali
Ngaba ukuhlamba komntwana kubalulekile?
Isitayela saseNtaliyane ngaphakathi kwekhitshi